Ayaa go'aamiya ficilladeena, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Inteena ugu badan ayaa jecel aragtida ah inaan gacanta ku hayno nolosheena. Ma dooneynno in cid kale oo fikrad ka dhiibato guryaheena, qoysaskeena, ama dhaqaalaheena, in kasta oo ay fiican tahay in qof la eedeeyo markay wax xumaadaan. Markaan u malayno inaan lumino xakameynta xaalad gaar ah, waxaan dareemaynaa raaxo darro iyo cabsi.
Waxaan u malaynayaa markaan akhrino qaar ka mid ah tarjumaadaha Baybalka iyo buugaagta qaarkood inay tahay inaan hoosta ka hoos mariyo hagida Ruuxa Quduuska ah, inaan dareemno inaan raaxo laheyn. Waan ogahay in Ilaah, si cajaa'ib leh, uu u leeyahay inuu xukumo midkastoo abuurkiisa ah. Wuxuu awood u leeyahay inuu ku qabto wax kasta oo uu doonayo. Laakiin miyuu "xukumaa" aniga?
Haddii uu sameeyo, sidee u shaqeysaa? Fikirkaygu wuxuu u dhacayaa sidan oo kale: Markii aan u aqbalay Ciise inuu yahay Bixiyaha, oo aan naftayda siiyo Eebbe, waxaan ku hoos jiray gacanta Ruuxa Quduuska ah mana dembiyo dambe. Laakiin anigu weli dembigayga kuma xukumi karo; Iyo, haddii aanan hoos imaan xukunkiisa, markaa waa inaan qabaa dhibaato dabeecad. Laakiin runtii ma doonayo inaan ka tanaasulo noloshayda. Marka waxaan qabaa dhibaato dabeecad. Taasi waxay u muuqataa mid aad ugu eg goobaabintii bahalnimada ahaa ee uu Paul ku sharraxay Römer.
Dhowr uun (Ingiriisiga) tarjumida ayaa adeegsanaya erayga xakamaynta. Kuwa kalena waxay isticmaalaan weedho u eg socdaal hagitaan ama isbeddel maskaxda ah. Qorayaal badan ayaa ka hadlaya Ruuxa Quduuska ah marka loo eego xakamaynta. Maaddaama aanan ahayn taageere u sinnaan la'aanta tarjumaadda, waxaan doonayay inaan gaaro halkaan hoose. Waxaan waydiiyay kaaliyeheteyda cilmibaarista (ninkaygu) inuu ii raadsado ereyada Griiga. Rooma 8, aayadaha 5 ilaa 9, ereyga Griiga ee xakameynta xitaa looma adeegsan! Erayada Giriigga waa "kata sarka" ("Hilibka ka dib") iyo kata pneuma ("Maskaxda ka dib)" oo aan lahayn wax xakameyn ah. Hase yeeshe, waxay metelaan laba kooxood oo dad ah, kuwaas oo ah kuwa diirada saara hilibka oo aan Ilaah isu dhiibin, iyo kuwa ku foogan Ruuxa oo isku dayaan inay ka farxiyaan oo addeecaan Ilaah. Erayada Giriigga ee aayadaha kale ee aan ka shakiyay macnaheedu maahan "in la xakameeyo" midkoodna.
Ruuxa Quduuska ahi nama xukumo; marna ma isticmaalo rabshad. Isagu si tartiib ah ayuu inoogu hanuuniyaa markaan is dhiibno. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ku hadlayaa cod deggan, qabow. Anaga ayaa na saaran inaan jawaab ka bixinno isaga.
Waxaan ku jirnaa ruuxda marka ruuxa Ilaah inagu dhex jiro (Rooma 8,9). Tan macnaheedu waa inaan ku noolaano sida Ruuxa, ku dhex soconno, u daryeelayno waxyaabaha Ilaahay, u dhiibno doonistiisa nolosheena oo ay nagu hoggaamiyaan isaga.
Waxaan leenahay isla doorashadii Aadan iyo Xaawo waxaan dooran karnaa nolosha ama waxaan dooran karnaa dhimasho. Eebbe ma doonayo inuu na xukumo. Ma doonayo mashiinno ama robots. Wuxuu doonayaa inuu doorto nolosha Masiixa wuxuuna u oggolaanayaa in ruuxiisu inagu hagto nolosha. Xaqiiqdii tani way ka fiican tahay maxaa yeelay haddii aan wax uun dhacaan oo aan dembaabno wax kama celin karno Ilaah arrintaas. Haddii aan ikhtiyaar u leenahay, markaa ma hayno cid aan nafteena ku eedaynno.